के तपाईलाई मधुमेह छ ? यसो गर्नुहोस् । - Health Today Nepal
के तपाईलाई मधुमेह छ ? यसो गर्नुहोस् ।
April 23rd, 2018 उपचार बिधी0comments
१०, बैशाखः मधुमेह भन्नासाथ चिनी रोग अर्थात् चिनी खान नहुने रोग भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले, हामी मधुमेहका बिरामीका लागि चिया होस् वा अन्य कुनै मिठाई चिनी हाल्नै दिदैनौँ । कतिसम्म भने फलफूल खाँदा पनि गुलियो नभएका फलफूल खाने सल्लाह दिन्छन चिकित्सकहरु ।
त्यतिमात्र कहाँ हो र, मधुमेहका बिरामीले त भात नि खान नहुने भनिन्छ । भातमा कार्वोहाइड्रेट धेरै हुन्छ । भात खानेबित्तिकै रगतमा चिनीको मात्रा (सुगर) बढिहाल्छ । आलुमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ ।
जब कि मधुमेहका बिरामीले मधुमेह रोग लागि सकेपछि हर्मोन वा इन्डोक्राइनोलोजिस्टलाई देखाउनु त पर्छ नै । साथै सन्तुलित भोजन तथा पोषणयुक्त भोजनका लागि एकपटक पोषण विद्सितको सल्लाह लिनु आवश्यक हुन्छ । यसले मधुमेहका विरामीलाई पोषणयुक्त तत्वको सेवन कसरी गर्ने मात्र नभई दिनमा कति पटक र के के खाने तथा कसरी खाने भन्नेबारे बुझ्न समेत मद्दत गर्छ । मधुमेहका विरामी अक्सर खाना कम खाने गर्छन् । त्यस्तै गुलियो मिसिएको खानेकुरा खानु हुँदैन भन्दै शरीरका लागि आवश्यक तत्व समेत ग्रहण गर्दैनन् । जसले गर्दा मधुमेहका विरामीको शरीरलाई आवश्यक पोषण त पुग्दैन नै । शरीरका लागि चाहिने इनर्जी समेत खानाबाट प्राप्त नहुँदा विरामी कमजोर हुने गर्दछ ।
त्यो कसरी भने हामीले खाएको खाना ग्लूकोजमा परिणत हुन्छ । यसले शरीरलाई इनर्जी प्रदान गर्छ । जब कि मधुमेह बिरामीले खाएको खाना ग्लूकोजमा परिणत त हुन्छ तर उक्त ग्लुकोज इनर्जीको रूपमा परिणत हुन सक्दैन । त्यसपछि मधुमेहका कारण विरामीको आँखा, मुटु, मिर्गौला, नसा लगायत शरीरका विभिन्न अंगमा समेत असर पर्छ ।
मधुमेहका कारण हुनसक्ने जटिलता रोक्न के गर्ने त ?
रगतमा चिनीको मात्रा कम गर्न मधुमेहका बिरामीले सबैभन्दा पहिले समय समयमा थोरै थोरै भए पनि केही न केही खानेकुरा खाइराख्नु पर्दछ । त्यस्तै, जे खाए पनि मात्रा मिलाएर खानुपर्दछ । चार घण्टाको अन्तरालमा खाना खानुपर्छ । आफ्नो तौल तथा उचाइका आधारमा खानुपर्छ । शरीरलाई आवश्यक पर्ने क्यालोरी अनुसार खानुपर्छ । किनभने आवश्यकताभन्दा कम तथा बढी क्यालोरी शरीरका लागि घातक हुनसक्छ ।
प्रत्येक व्यक्तिको खाने तरिका फरक हुन्छ । खानाको आआफ्नै रोजाइ हुन्छ । त्यसैको आधारमा कोही व्यक्ति सागपातमा धेरै रमाउँछन् भने कोही दालभातमा । जो व्यक्ति तरकारी धेरै खान्छन, उनीहरूलाई त खासै समस्या नहोला तर जो व्यक्ति दालभात धेरै रुचाउँछन्, उनीहरूमा क्यालोरी समस्या हुनसक्छ ।
एउटा व्यक्तिले दिनमा २१ सय क्यालोरीको सेवन गर्छ भने अब मधुमेह भइसकेपछि उसले उक्त २१ सय क्यालोरीलाई विभिन्न चरणमा बाँडेर खानुपर्छ । उसले बिहानको समयमा एक कप चियाको साथमा दुई पिस सुगर फ्रि बिस्कुट खान सक्छ । बिहान दश बजेको समयमा खाना खान सक्छ । खाना खाँदा थोरै भात, धेरै तरकारी राख्नसक्छ । तरकारीमा पनि एक भाग हरियो सागसब्जी तथा एक भाग अन्य तरकारी राख्नसक्छ । थोरै अचार पनि राख्न सक्छ । केही टुक्रा सलादका साथमा दही, पातलो दाल तथा अन्य खानेकुरा राखेर उक्त थाल मज्जाले भर्न सक्छ । त्यस्तै दिउँसो चिउरा, रोटी, ओट मिल लगायतका हल्का खाजा खानुका साथै पाँच बजेतिर करिब दुई सय ग्राम फलफूल खानसक्छ । रातको खानामा थोरै तरकारीका साथमा दुईवटा रोटी खाएर पनि आफ्नो खानालाई सन्तुलित राख्न सकिन्छ ।
मधुमेहका विरामीले के गर्ने के नगर्ने ?
मधुमेहका विरामीले आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान दिएर पनि मधुमेहलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छन् । त्यसको लागि मधुमेहका विरामीले गुलियो, चिनी धेरै हालेको तथा ग्लूकोज युक्त खानेकुरा सिधै खानु हुँदैन । त्यस्तै, थोरै थारै खाने तर धेरै पटक खाने गर्नु पर्छ । मधुमेहका विरामीका लागि मेथी निकै लाभदायक हुने भएकोले उनीहरूले आफ्नो आहारमा टुसा उमारेको मेथीलाई हल्का तारेर तथा उसिनेर पनि खान सक्छन् । तरकारीमा मेथी पड्काएर पनि त्यसको स्वाद लिनसक्छन् ।
त्यस्तै खानामा फापरको रोटी, सिस्नु आदिलाई पनि समावेश गर्न सकिन्छ । फलफूलमा स्याउ उत्तम मानिन्छ । स्याउमा भरपूर मात्रामा फ्रुक्टोस हुन्छ । फ्रुक्टोसकै कारण स्याउ गुलियो हुने भएकोले यसलाई खाँदा मधुमहेका रोगीहरूलाई खासै फरक पर्दैन । यद्यपि अत्यधिक मात्रामा स्याउको सेवनले मधुमेहका बिरामीको आँखामा भने असर गर्न सक्छ । त्यसैले, यस कुरामा भने विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
मधुमेहका रोगीले गुलियो खानेकुरा सकेसम्म खानुहुँदैन । गुलियोले रगतमा चिनीको मात्रा बढाउने हुँदा मधुमेहका विरामीले गुलियो पेय पदार्थ, सोडा, जुस आदि खानु हुँदैन । त्यस्तै भुटेको तारेको, चिल्लो आदि खानु हुँदैन । पिज्जा, वर्गर जस्ता फास्टफुड पनि सेवन गर्नु हुँदैन ।
च्याँख्ला पनि धेरै खानुहुँदैन । च्याँख्लामा पनि क्यालोरीको मात्रा धेरै हुने गर्छ । यही कुरा नबुझेर मधुमेहका विरामीले भात त कम खान्छन्, तर च्याँख्ला भने धेरै खान्छन् । जसका कारण मधुमेहमा कमी आउनुको सट्टा झन् बढ्ने गर्छ । शरीरलाई आवश्यक पर्ने क्यालोरीयुक्त खाना खाएर वा चिकित्सकको परामर्श अनुसार खाना खाए मधुमेह रोगको रोकथाम गर्न सकिन्छ ।
Previous article शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुरको – सूचना
Next article आफ्नै लगानीमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना
सानोतिनो रोगमा कडा एन्टिवायोटिक
उपचार गर्ने अस्पताल नै सिकिस्त
अब माइक्रोस्कोपबाट दाँतको उपचार